शुद्ध आर्गन तेल | अर्गन तेल | HelpMeHemp - मद्दत MEHemp
घर उत्पादन शुद्ध आर्गन तेल
मद्दत MEHemp's शुद्ध Argan तेल यसको शुद्ध रूप मा छ र अन्यथा "तरल सुन" भनेर चिनिन्छ। आर्गन तेलमा भिटामिन ई, अत्यावश्यक फ्याटी एसिड, लिनोलिक एसिड, र एन्टी-ऑक्सीडन्ट्सको आश्चर्यजनक प्रशस्तता हुन्छ जुन तपाइँको छाला, कपाल र न !हरूलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्दछ!
हाम्रो शुद्ध आर्गन तेल रिहाइड्रेट गर्दछ र तपाईंको छालालाई म्याइश्चराइज गर्दछ, सुक्खा प्याचहरू नरम बनाउँदै, एक्ने कम गर्दछ, र कमजोर छालालाई बहाल गर्दछ, तन्का मार्कहरू, क्र्याक, कलौसेड, वा झोला छाला, र दाग टिशूहरू सहित। हाम्रो उत्पादन एक सुख्खा, गैर-चिल्लो तेल हो जुन चाँडै सबै छालाका प्रकारहरू द्वारा अवशोषित हुन्छ, जसले यसलाई छिद्र रोक्नबाट बचाउँदछ वा पातलो अवशेषहरूको पछाडि छोड्दछ।. मद्दत MEHemp's शुद्ध Argan तेल क्षतिग्रस्त कपाललाई प्राकृतिक चमक र पुनर्स्थापन पनि प्रदान गर्दछ, विभाजन टुक्राहरूको रोकथाममा योगदान गर्दछ, र भंगुर न nailsहरूमा प्राकृतिक पुनर्जन्म प्रदान गर्दछ।
मद्दत MEHemp® हाम्रो घर बाक्लो पाले बाले गिलास को उपयोग संग तपाईं चकित हुनेछ, कुनै हानिकारक प्रकाश स्रोत बाट तेल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। Let मद्दत MEHemp's शुद्ध आर्गन तेल पहेंलो इट्टाको सडक हुन जुन तपाइँको छालालाई घरतिर लैजान्छ!
रमाईलो तथ्य! अर्गन रूख उत्तरी अफ्रिका मात्र मोरोक्कोको राज्यमा स्वदेशी हो। यस बहिष्करण र आपूर्ति र मागको आर्थिक सिद्धान्तहरूको कारण रूखको फलबाट तेल निकाल्ने गिरी मोरक्कोको अर्थव्यवस्थाको लागि अत्यधिक नाफामूलक र आवश्यक रहेको छ।
निष्कर्षण प्रक्रिया यस प्राकृतिक सीरमको शुद्धीकरण प्रभावकारिता र यसको शुद्धताको लागि महत्वपूर्ण छ। "मोरक्कन तेल" संग भ्रमित हुनु हुँदैन जुन यो सस्तो ओभरहेड लागत र बिगबक्स विक्रेताहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको लागि ठूलो आर्थिक लाभको कारण वाणिज्य रूपमा बेचिन्छ, "मोरक्कन तेल" मा उत्पादित सिलिकॉन, रसायनिक रूपमा परिष्कृत पूरकहरू सहित धेरै थप सामग्रीहरू समावेश गर्दछ। र र color, सुगन्ध, स्थिरता, वा पातलो भोल्युमका लागि विशेष योजकहरू। यस ईन्फेरियर एन्ड-प्रोडक्टसँग कुनै उपचार क्षमताहरू हुँदैन जुन सामान्यतया आर्गन तेलसँग सम्बन्धित छ।
मद्दत MEHemp customers ले यसको शुद्ध रूप मा ग्राहकहरु लाई Argan तेल प्रदान गर्दछ; मोरोक्कोको राज्यबाट सिधा बाहिर निकालिए, केवल एक घटकको साथ ...
आकार २.२ औंस स्किनकेयर पम्प १ ओज ड्रॉपर १० मिलि आवश्यक तेल रोलर रेड ज्यास्पर १० मिलि आवश्यक तेल रोलर टाइगर आँखा ढु .्गा १० मिलि आवश्यक तेल रोलर ल्यापिस लाजुली १० मिलि आवश्यक तेल रोलर फ्लोराइट १० मिलि आवश्यक तेल रोलर गुलाब क्वार्ट्ज १० मिलि आवश्यक तेल रोलर नीलम पत्थर १० मिलि आवश्यक तेल रोलर ग्रीन Aventurine १० मिलि आवश्यक तेल रोलर खाली क्रिस्टल १० मिलि आवश्यक तेल रोलर सोडालाइट १० मिलि आवश्यक तेल रोलर Obsidian
9 समीक्षाहरूमा आधारित एउटा समीक्षा लेख्नुहोस्
यो आर्गन तेलसँग धेरै तरिकाहरू छन् जुन यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ, एक्ने, सुख्खा छाला, खैरो दागहरू, र कपालले यसलाई आकर्षक बनाउँदछ। यसले कटौतीलाई निको पार्न मद्दत गर्दछ, मेरो ठूलो नातिले अर्को दिन मेरो अनुहार कोरियो (ऊ भर्खर एक वर्षको भइसकेको छ) र मैले यसमा आर्गन तेल राखें र यसले जलिरहेको रोकिदियो र अब तपाईं कहिले पनि भन्न सक्नुहुन्न कि यो कहिले भयो।
यस उत्पादनले मेरो छालामा आवश्यक चमक र उचाल थप्यो, र मेरो नेल ब्याडहरूका लागि धेरै उपयोगी थियो। यो मलाई मन पर्छ!
म हरेक बिहान र हरेक रात मेरो अनुहारको लागि आर्गन तेल प्रयोग गर्दछु। मसँग अति संवेदनशील छाला छ र यो मेरो लागि मात्र तेल भएको छ जसले ब्रेकआउट उत्पन्न गर्दैन। पहिलो पटक प्रयोग गर्दा म एउटा संक्रमण बाट आएको थिएँ। तर यो आश्चर्यजनक काम गर्दछ। म यो रातमा मेरा खुट्टामा पनि प्रयोग गर्दछु र रातमा सारान र्यापमा लपेट्छु, मेरा खुट्टाहरू पुन: मसिश्चराइज गर्न!
मेरो कपाल र अनुहारको लागि पनि यो तेललाई माया गर्नुहोस्
यो बिहान र रात प्रयोग गर्नुहोस्। प्रेम प्रेम यस उत्पादन लाई माया गर्नुहोस्।
मलाई यो चीज मन पर्छ तर कन्टेनर कती सानो थियो भन्नेमा अचम्मित भए। धेरै धेरै राम्रो चीज जबकि।
HelpMEHemp छाला हेरचाह लाइन प्रयोग गर्दा यसले मेरो सोरायसिसलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍यायो। तपाईका उत्पादनहरूले मेरो लागि के गरेन कुनै मेडिसिन वा PREScriptTION क्रीम हुन सक्छ। धन्यवाद
टाउको देखि औंला सम्म टाउको देखि औंला सम्म म यो उत्पादन प्रयोग गर्दैछु। मैले मेरो घिचुवा कपाल र मेरो खुरखुट्टा हेलिरहेको छु। मन पराउँछु!
जहाँ जहाँ म जान्छु अर्गान मेरो नेलको ओछ्यान चिपिने छ र मेरो छालामा रगत बग्यो भने हावामा हुने क्षतिले मेरो नाकमा सुख्खा दर्दनाक खुरचनीबाट रगत बग्नेछ। म प्राय: चोटि मेरो चम्किने चोटहरू कम गर्दछु। मैले भन्नु पर्छ कि आर्गन आधिकारिक रूपमा पौष्टिक गुणहरूले भरिएको छ जुन चाँडै निको हुन्छ। म अर्गानको बारेमा जान्न पाउँदा खुसी छु, धन्यवाद मद्दत! हिलिंग अर्थहरू सबैभन्दा आश्चर्यजनक प्राकृतिक संसाधन हो !!!
तपाईं मेरो धूप मेरो मात्र धूप हुनुहुन्छ! यदि तपाईंसँग निशान छ भने यो एउटा अचम्मको उत्पादन हो जुन मैले ठूलो शल्यक्रिया गरेको थिएँ र तुरुन्तै मलाई बदमाश दाग लाग्यो मैले मेरो अनुगमन नियुक्तिमा आर्गन तेल राख्न शुरू गरें सर्जन अचम्मित थियो मैले उपचार प्रक्रियामा उनीहरूलाई बताएँ जुन मैले प्रयोग गरिरहेको थिएँ उनले बिल्कुल भने। त्यो अर्गान तेलको एक शुद्ध रूप हुनुपर्दछ! यो कार मेरो छातीको बीचमा छ र चीजहरू मलाई सहयोग पुर्‍याउन म यस गर्मीमा मेरो बिकनी र ट्यान लगाउन सक्छु मैले सोचे कि म फेरि कहिल्यै सूर्यको किरण देख्दिन !!!!!!!! धन्यवाद मेरो धूप !!!!
आश्चर्यजनक! यो अहिले सम्म मेरो मनपर्ने उत्पादन हो! म एक हप्ता भन्दा अलि बढी प्रयोग गर्दै छु र मैले मेरो छालामा देख्न सक्ने भिन्नता पागल हो। साना लाइनहरू हराउँदैछन्, मेरो छाला मखमल छ र डेभिक लुक छ। र यसले मोटो र स्वस्थ महसुस गर्दछ! यो माया!
उत्तम तेल यो तेल आश्चर्यजनक छ। यसले मेरो सम्पूर्ण परिवारको साथ छाला सम्बन्धी समस्याहरूमा मद्दत पुर्‍याएको छ। मलाई यो मेरो कपालमा प्रयोग गर्न मन पर्छ हामीसँग फज र कडा पानीको साथ मद्दत गर्न। राम्रो सामग्री!!
उच्च गुणवत्ता यस अर्गान तेल लाई माया गर्नुहोस्, तपाई निश्चित रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ यो उच्च गुणवत्ता हो। सँधै अनुहारमा प्राकृतिक तेलहरू प्रयोग गर्ने ठूलो विश्वास भएको छ। बुढ्यौली, सफा गर्ने र तपाईंको छालालाई यति नरम बनाउने सहयोग गर्दछ।
Argan तेल यो तेल आश्चर्यजनक छ! यसले मेरो अनुहार उज्यालो बनाउँछ! यो चिल्लो र चिल्लो हुँदैन र साच्चै नै स्फूर्तिदायी गन्ध छ- सायद अलि सिट्रस! निश्चित रूप बाट मेरो छाला moisturizes! म यसलाई मेरो कपालमा पनि प्रयोग गर्दछु, म यसलाई सुख्खा सुख्खा पछि / स्ट्रेटर्निंग अघि लागू गर्दछु र यसले मेरो कपालमा चमक दिन्छ जुन मैले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन! अर्गनले मलाई सुन्दर बनाउँदैछ !!!! मन पराउँछु!